Short Stories Archives - Safal Stories
एक जना बुवाको दुई वटा छोरा थिए। छोराहरु बढ्दै गएपछि हाम्रो समाजमा सामान्यतया: घरको सम्पत्ति बांडफांड गर्ने चलन छ। दुई छोराहरुले सम्पत्ति बांडफांड गरे।...
अल्बर्ट आइन्स्टाइन र उनको ड्राइभर
अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सापेक्षाताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि विभिन्न ठाउँमा त्यस सम्बन्धि प्रस्तुति दिन हिंड्थे। त्यसरी हिंड्दा उनले आफ्नो ड्राइभरलाई संगै लिएर हिंड्थे। उनले प्रस्तुति दिंदा...
राजा अकबरका सल्लाहकार बिरबलको चातुर्यताको बारेमा सबैले गुणगान गाएको सुनेर इरानका राजालाई बिरबललाई भेट्न मन लाग्यो। उनले भेट्ने मात्र होइन, उनको चातुर्यताको परिक्षण गर्ने...
स्वामी विवेकानन्द र बाघ
स्वामी विवेकानन्दका बुवाको देहान्त हुँदा उनको घरमा एकदमै दु:ख थियो। बुवाको देहान्तपछि जब उनले भोकले पिरोलिएका आमा र भाइलाई देख्थे, उनले आफैलाई धिक्कार्थे ।...
कथा : ज्योतिषको भविष्यवाणी
कुनै एउटा गाउँमा एकजना प्रख्यात ज्योतिष थिए । उनले कुण्डली हेरेर भविष्यबारे साँचो भनिदिन सक्छन् भन्ने विश्वास थियो । त्यसैले टाढा टाढाका मानिस पनि...
कथा : उड्न नसक्ने चील !
चीलको एउटा अण्डा, कुनै कारणले वनकुखुराको गुँडमा पर्नपुग्यो । आफ्ना अण्डासंगै कुखुरीले त्यसलाई पनि कोरली । समय आएपछि चीलको चल्लो अरुझैं बाहिर आयो ।...
कथा : जमिन मुनिको सुन
कुनै एउटा गाउँमा बुवा र तीन भाई छोराहरु थिए। बुवाले जीवनभर दु:ख गरे। उनको थुप्रै जग्गा जमिन थियो, शरीरमा बल छउन्जेल सबै जग्गा जमिनमा...
खोलाको पानी र मानिसको विचारको आवेग
भगवान गौतम बुद्ध केही चेलाहरुसंग चौतारोमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो । यत्तिकैमा एक जना चेलाले सोधे , " गुरु ! नकारात्मक विचार दिमाग ल्याउनुहुन्न, तनाव लिनुहुन्न...
लोक कथा : धानको बाला
एउटा नेपाली लोक कथा अनुसार, धेरै वर्ष पहिले खेतमा धान फल्दा, धान फल्दैनथ्यो, चामल नै फल्थ्यो। एक दिन एक जना बाहुन खेत हुँदै फर्किएका...
मेरो छोरा आजबाट स्कुल जाँदैछ। केही समय उसका लागि सबै वस्तुहरु नौला अनि अचम्मका लाग्नेछन्। मेरो आशा छ, तपाईंहरुले उसंग नरम व्यवहार गर्नुहुनेछ । अहिलेसम्म...
123...88 पृष्ठ 1